(Somali) Madaxa Ururka Ogaden Voice for Peace oo warbixin dheer seeyey Ciidamo Mareykan ah uu u socda qaarada Afrika
OVP in the News
OVP in the News (Somali) Madaxa Ururka Ogaden Voice for Peace oo warbixin dheer seeyey Ciidamo Mareykan ah uu u socda qaarada Afrika
(Somali) Madaxa Ururka Ogaden Voice for Peace oo warbixin dheer seeyey Ciidamo Mareykan ah uu u socda qaarada Afrika	WEDNESDAY, 07 DECEMBER 2011
Madaxa Uruka Ogaden Voce for Peace oo warbixin dheer seeyey Ciidamo Mareykan ah uu u socda qaarada Afrika
San Diego, CA. Kulan aad loo soo agaasimay ayaa wuxuu ka dhacay Jaamacada balaaran ee layiraahdo " University of San Diego". Kulankaas waxaa warbixin qoto dheer, oo dhinacyo badan taabanaya lagu siinayey labo boqol iyo konton sarkaal, oo ka kala yimid dhamaan qeybaha kala duwan ee ciidamada Mareykanka. Kulankaas waxaa lagu martiqaaday ineey ka bixiyaan warbixin qoto dheer labo khabiir oo kala ah Mr. Cabdi Maxamud oo ah madaxa ururka "Ogaden voice for Peace", ururkaasoo ah mid isku dayaya in xal waara loo helo qadiyada geeska Afrika iyo Sarkaal Sarre oo Mareykan, oo ahaan jiray ninka u dajiya qorshaha ay ku hawlgalayaan dhamaan ciidamada mareykanka ee qaarada Afrika jooga. Waxaa kale uu ka hadley meelaha kala duwan eey Ciidanka Mareykanku ka fadhiyaan Africa iyo ujeedada dheer ee laga leeyahay Africa. Ciidamadan ayaa la rajeynayaa ineey mar dhow u ambabaxaan qaarada Afrika, ooy ka qeyb qaataan howlgalada baahsan ooy dawlada mareykanku ka fulineyso qaaradaas.
Mr. Abdi Maxamud ayaa halkaas ciidamada uga warbixiyey guud ahaan marxalada qaarada, gaar ahaan gobolka geeska Afrika. Mr. Maxamud wuxuu ka warbixiyey taariikhdii dheereyd, eek ala duwaneyd oo uu gobolku soo maray. Waxaa uu uga warbixiyey sideey isu badaleeyso siyaada gobolka, iyo marxalada adag ee uu gobolku hada marayo iyo sideey muhiim u tahay in xal dagadaga loo helo. Wuxuu kale uu ka hadlay siyaasada ka taagan wakhtigan wadanada ay ka kooban yihiin Somalia, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Kenya, Uganda, Tanzania iyo labada Sudan. Wuxuu kaloo uu kabixiyay fikrad wadankastaba dimoqraadiyada m
eesha ay marinayaan. Faahfaahintan oo dheerayd waxay kaloy taabatay dhibka siyaasada ah ee wadamadaa ka haysta gudahooda
Sarkaalkii Sarre aadna ugu dhuun daloola arimaha qaarada guud ahaan wuxuu aad u muujiyey muhiimada ah ineey dhamaan
ciidamadoodu fahmaan qorshohooda qotoda dheer oo mareykanku ka lee yahay qaarada iyo hawlgalada wax ku oolka ah oo mareykanku hada kawadaan guud ahaan qaarada iyo gaar ahaan gobolka geeska Afrika.
Waxaa kaloo kulankaas ka soo qeyb galay madaxda jaamacada iyo aqoonyahano wax ka dhiga jaamacada. Kulankaasna waxaa lagu soo gabagabeeyay casho sharaf aay ka wada qeyb qaateen dhamaan dadkii kulanka ka soo qeyb galay.
Hadaad rabtaan in aad Ogaden Voice for Peace wax ka ogaatan, tag
HomeAbout OVPHistoryConferencesOct. 2009DocumentsOVP in the NewsCapitol HillHuman RightsEvent ArchiveGalleryContact Us	Research
Report on the Findings from the UN Humanitarian Assessment Mission to the Somali Region
View PDF Report on the Findings From The UN Humanitarian Assessment...	1
If you have further questions about the Ogaden Voice for Peace, please feel free to contact us at:The Ogaden Voice for Peace6035 University Avenue, Suite #6San Diego, CA, 92115ogadenvoice@aol.com
Designed by DiverseCity Tech © Copyright 2009 Voice of Ogaden, All Rights Reserved
Login Form Courtesy of DiverseCity Tech